चन्दा आतंक मच्चाएर काठमाडौंमा घर बनाउने नेविसंघकै नेता मैले देखेको छु – YesKathmandu.com
चन्दा आतंक मच्चाएर काठमाडौंमा घर बनाउने नेविसंघकै नेता मैले देखेको छु
जतिपटक नेविसंघको महाधिबेशन मिति तोकियो, त्यति पटक केही नेविसंघका नेताले चन्दा आतंक मच्चाए । त्यही चन्दा आतंककाबिरुद्ध छन् नेविसंघ अध्यक्षका उम्मेद्धार शुभराम बस्नेत । उनीसँग गरिएको कुराकानी ।
पाँच पटक मिति तोक्दा पनि स्थगित भएको नेविसंघको महाधिबेशन फेरी मिति तोकिएको छ । के यसपटक महाधिबेशन पक्कै होला ?
विगतका दिनहरुमा नेतृत्व इमान्दार नबन्दा मिति तोकिदा पनि अधिबेशन हुन सकेन । जब पार्टीको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा आउनु भयो त्यसपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले ६ महिना भित्र सम्पूर्ण भातृ संगठनहरुको निर्वाचन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनायो ।
नेविसंघ भित्र अहिले पनि केही समस्याहरु छन् । जुन समस्याहरु विगतका दिनहरुमा पनि थिए । तर ती समस्याहरुको समाधान गर्दे अब महाधिवेशन गर्ने बाटोतिर हामी गएका छौ । विगतका दिनहरुमा नेतृत्व इमान्दारी नबनेका कारण महाधिबेशन हुन सकेको थिएन । तर अहिले पार्टी सभापतिबाटै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सर्कुलर जारी भइसकेको छ । अब महाधिबेशनका बारेमा टिकाटिप्पनी गरिराख्न जरुरी छैन । महाधिबेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ ।
नेविसंघको माहाधिवेशन हुन नसक्नुको प्रमूख कारण माउ पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु कै हात छ भनिन्छ नि ?
हिजो कांग्रेस एउटा भएपनि दुई पार्टीको अस्थित्व जस्तो थियो । जहाँ नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेर आन्तरिकरुपमा दुई खेमामा थिए । पार्टी एकीकरण भएपछि महिला संघ र तरुण दल शेरबहादुर देउवाको भागमा थियो भने नेविसंघ लगायतका संगठनहरु संस्थापन पक्षसँग थियो ।
यहाँभित्र लोभि पापीहरुको एउटा जमात थियो र छ पनि । तिनिहरुका कारण कांग्रेस भात्रृ संगठनका महाधिबेशनहरु हुन सकेका थिएनन् । केहि विद्यार्थी नेताहरुले लाभांशको नाममा तल्लो स्तरमा नै गिरेर चन्दा आतंक मच्चाए । बजार र ब्यापारीहरुलाई अति तनाव हुनेगरी चन्दा असुली गर्नाले पनि महाधिवेशन प्रभावित बनेका थिए ।
नेविसंघका देश विदेशमा शाखाहरु छन् । ति शाखाका कार्यक्रममा भाग लिन नेपालबाट जाने र आफैसँग लिएर गएका ब्यक्तिलाई उतै लुकाउने । माटो रकमको आशमा यस्तो धन्दा पनि चल्यो । यसमा पार्टीका भन्दा पनि नेविसंघकै केही नेताका कारण महाधिबेशन प्रभावित हुँदै आएको हो ।
चन्दा के का लागि, नेता धनी हुन की निर्वाचन गराउन ?
नेविसंंघ नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने सुन्दर नर्सरी हो । नेविसंघमा कार्यरत विद्यार्थीहरु पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने गर्दछन् । तर यति सुन्दर नर्सरीमा केही लगत बोट पनि पर्ने रहेछन् । विगत केहि समययता व्यक्तिगतरुपमा आयआर्जन गर्ने काममा नेविसंघका नेताहरु सक्रिय हुन थालेका छन् । यो एउटा नेविसंघमा लागेको क्यान्सर हो । नेतृत्वमा रहेका केहीले काठमाडौंको महत्वपूर्ण स्थानमा घर जग्गा जोड्नुले पनि यसको प्रमाण दिन्छ । नेविसंघलाई कमाउ धन्दाको अखडा लिने र व्यवसाय गर्ने गरेको हल्ला मैले पनि सुनेको छु र अनुभुति पनि गरेको छु । अधिवेशन नहुनुमा एउटा चन्दा असुली, दोस्रो विदेशमा गरिने विभिन्न कार्यक्रममा नाममा जम्वो टिम लिने र केहीलाइ उतै छाडेर आउँने, त्यसको बदलामा मोटो रकम असुल्नेहरुको पकडमा नेबिसंघ रह्यो । त्यो पनि घृणित कार्यपनि महाधिबेशनका लागि बाधक बन्यो ।
तपाई साँच्चिकै अध्यक्षको उम्मेद्धार हो की घोषणा मात्रै हो ?
म राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हो । मलाई राजनीतिक गर्नमा मेरो बुवाको ठुलो हात छ । मलाई बुवाले निष्ठाको राजनीति गर्न सिकाउनु भएको छ । त्यसैले गर्दा निष्ठापूर्ण राजनीति त्यो पनि जीवनभर देश र जनताका लागि काम गर्न मेरो मक्सद हो । त्यसैले नेविसंघ भित्रका यावत कमिकमजोरी र चरम लापरवाहीलाई न्यूनिकरण गर्दै स्वच्छ, पारदर्शी र सभ्य नेविसंघ बलाउनका लागि पनि मेरो उम्मेद्धारी हो । ख्याल ठट्टा गर्न मैले उम्मेद्धारी घोषणा गरेको होइन, अध्यक्ष बन्न र सभ्य नेविसंघ बनाउन मेरो उम्मेद्धारी हो ।
तपाइका प्रतिस्पर्धी लामो समय नेविसंघमा विताएका छन् । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो होला र ?
एकै ठाउँमा लामो समय बस्ने अनि म यहाँको पुरानो पुस्ता हो भन्ने, त्यो नैतिकताको राजनीति हुँदैन । राजनीति गर्नका लागि पहिला राम्रो भिजन चाहिन्छ । राजनीतिमा स्वच्छ र इमान्दारिता चाहिन्छ । जसका कारण राजनीतिमा सिनियर जुनियर भन्ने हुँदैन । लामो समय एकै ठाउँ बसिरहनु राजनीतिमा असक्षमता हो । उसले आफूमा रहेकोे प्रतिभा देखाउन नसक्नु हो । मतदाता जुन पुस्ताका छन् नेता पनि त्यही पुस्ताको हुनुपर्छ भन्ने मेरो र आम नेविसंघमा मान्यता छ । त्यसकारण पनि मलाई कुनै डर छैन । मलाइै डर चै के मा छ भने नेताहरुले मरेको विरालोलाई काँधका राखेर जंगार तार्छन् की भन्ने कुरामा छ । त्यसलाई चिर्नका लागि हामी युवा नेतृत्वमा रहेर काम गरेका सबै पक्ष विपक्षमा जति छौ हामी एक ढिक्का भएर यसलाइ चिर्न तयारीमा छौ ।
तपाई स्ववियु सभापति पनि भई सक्नु भएको छ । त्यस्ता के लोकप्रिय काम गनुभयो ?
हिजो म स्ववियु सभापति जस्तो सानो परिधि भित्र थिए । जुन परिधि भित्र रहँदा कलेजको दायित्वबाट काम गर्ने मौका पाँए । कलेज भित्रको कुरा गर्दा शंकरदेव नेपालको टप कलेज हो । जहाँ बिबिएसमा नेपाल टप भयो । एमएस पनि राम्रो छ । बिबिए नेपाल कै टप हो । र अर्को के हो भने कलेजको वातावरण देखि लिएर कलेज भित्रका राजनीतिक। शैक्षिक सामाजिक सबै पक्षमा शंकरदेव नमुनाको कलेज बनाएका छौ । म सानो परिधि भित्र रहेर पनि राज्यस्तरका करिव २० वटा कार्यक्रम गरेको छु ।
राष्ट्रिय सभागृहमा १८, प्रज्ञा प्रतिस्ठान र राष्ट्रिय नाच घरमा एउटा कार्यक्रम गरेँ । ११ बर्षसम्म स्ववियू परिषदको अधिबेशन हुन सकेको थिएन । परिषदको जिम्मेवारी पाएको ६ महिनाभित्र अधिबेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ । नेविसंघको अधिबेशन नभइरहेका बेला म जस्तो राजनीतिज्ञलाई ८३ वटा स्ववियू मिलेर बनेको परिषद मेरा लागि उपयोगि हुनसक्थ्यो तर मैले स्वार्थको राजनीति गरिन । इमान्दारीकासाथ अधिबेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ ।
त्रिभुवन विश्वबिद्यालयको इतिहासमा मैले एउटा नयाँ कार्यक्रम गरेँ । होटल अन्नपूर्णमा इन्टरनेशनल बिजनेश कन्फेरेन्स गरेँ । जहाँ अमेरिकाका टफ फाइप कजेजका सहायक डिनलाई नेपाल निम्त्याए र कार्यक्रममा सहभागि बनाएँ । मेरो त्यो दुई दिने कार्यक्रममा त्रिविका भिसी, रजिष्टार सवै आएर धन्यवाद पनि दिए । जुन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । त्यो कार्यक्रममा त्रिविका उच्च पदस्थहरुले पनि हामीले गर्न नसकेको काम एउटा ब्यक्तिबाट गुर्न भयो भनेर प्रसंसा गर्नुभयो । पछि शेरबहादुर देउवाले यति ठुलो कार्यक्रम रहेछ मलाई थौर तयारी गर्न मौकासम्म दिएनौ भन्नुभयो ।
मेरो यात्रा यतिमै सकिदैन्थो । मैले देशभर जिपी कप भनेर भलिवल प्रतियोगिता गराएँ । नेपाली कांग्रेसका नेताको सम्झनामा शंकरदेव क्याम्पसभित्रबाट मैले सुरु गरेको जिपी कप अभियान अहिले देशब्यापी भएको छ । भलिवलबाट सुरु गरेको थिएँ, अहिले धेरे खेलहरु भइहरेका छन् ।
मैले यो कुरा किन गरेको भने एउटा सानो परिधि एउटा कलेको नेतृत्व मात्र मसँग थियो । स्रोत साधन पनि पर्याप्त मात्रामा थिएन । तरपनि साहसका साथ यी अभियान चलाएँ । म नेविसंघको भावि नेतृत्वका लागि तयार छु र सक्षम छु भन्ने मेरो दावी छ । कहिलेकाँही हामी नेताको घरमा टिकटका लागि पुग्छौ । त्यो बेला म भन्ने गर्दछु, ‘नेविसंघको तीन कार्यकाल काम गरेका साथी र मैले एउटा क्याम्पसबाट गरेका कामको मुल्याङकण गरौ ।’ गतिविध र कामका हिसावले नेतृत्व लिने र दिने कुरा हो । मेरा गतिविधि र काम अरुकाभन्दा कम भए म चुनावमा आउँदिन तर मुल्याङकण गरिदिनुस भनेर नेताहरुलाई भनेको छु ।
शैक्षिक गतिविधि के गर्नु भयो ? जसले आम बिद्यार्थीलाई राहत दियो ?
शैक्षिक हिसावले पनि मेरा गतिविधि अन्यका भन्दा अग्रणी नै छन् । त्रिविले १२ सयप्रतिसत फि बढाउँदा मैले नै विरोध गरेको हुँ । सुलभ शुल्कमा बिद्यार्थीले पढ्न पाउनु पर्दछ, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्दछ । शिक्षा नै मुलुकको ताकत हो, रकमका कारण शिक्षाबाट कोही बंचित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क थियो र छ पनि ।
जतिपटक महाधिबेशनका मिति तोकिन्थे, अन्य साथीहरु चन्दा असुल गर्न ब्यापारी कर्मचारीसँग पुग्थे । तर म भने एउटा पढ्न चाहने तर आर्थिक अभावले पढ्न नसकेका बिद्यार्थीलाई पढाई दिन ब्यापारी र कर्मचारीसँग पुग्थे । उहाँहरुलाई कन्भिन्स पनि गरेँ । शंकरदेवभन्दा बाहिर मात्र यस्ता बिद्यार्थीको संख्या २ सय भन्दा बढि छ । शंकरदेवमा मैले बार्षिक २ सय बिद्यार्थी फ्रिमा पढाउने गरेको छु ।
हाम्रा केही साथीहरुले आज मैले चिया र चुरोट छोडेर एउटा बिद्यार्थी पढाएँ भन्दै हिड्नु भयो र उहाँको ठुलो प्रचार भयो । तर मैले त २ सय बिद्यार्थी प्रतिबर्ष पढाइरहेको छु, नपत्याए शंकरदेव क्याम्पस प्रशासनलाई सोध्नुस् ।
महाधिबेशन भन्ने तर टिका लगाएर नेतृत्व छान्ने काम नेविसंघमा हुँदैछ भन्ने हल्ला पनि छ, त्यो दौडमा कति दौडिनु भएको छ ?
कमजोर मान्छेको खेल नै सहमतिका नाममा नेतृत्वमा हत्याउने हुन्छ । भन्दा सहमति र सहकार्य तर आत्मकेन्द्रित निर्णय गराउने हो । त्यो एउटा झुण्ड नेविसंघ भित्र अबश्य छ । तर हामी डेमोक्रियासिस प्रोसेस मुल्य र मान्यतालाई मान्छौ । चुनावमा जित्न सकिन्छ, हार्न सकिन्छ, जमानत जफत पनि हुन्छ । त्यसलाई स्वीकार्नु नै लोकतान्त्रिक कल्चर हो । भोटरको विवेकको सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । तर यहाँ त के भैदियो भने चुवावलाई फेस गर्न नसक्ने, नेताहरुको घरदैलोमा सधैभरी पहरा दिने, त्यहीबाट सर्लक्क नेता बन्ने दाउ पनि भइरहेका छन् । तर त्यसमा सहमतिको ढोल बजाउने कोशिस गरिदैछ । मुल बाटो छोडेर गोरेटोबाट छिर्ने, मुलढोका छोडेर झस्केलाबाट छिर्ने परिपाटी हो त्यो । यो अब सम्भव छैन । किन भने १२ बर्षसम्म अधिबेशन नभएपछि युवाको एउटा ठुलो पंक्ति मर्कामा परिसकेका छन् ।
हामी भन्दा माथीको पुस्तालाई पार्टीले ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । भोटर र नेता एउटै फेसका हुनु कदापी हुँदैन अब । बाबु र छोरा एउटै पुस्ताका हुनै सक्दैनन् । भतिजले भोट हाल्ने काकाले चुनाव लड्ने हुनु हुदैन । बृद्धभत्ता खाने बेलासम्म नेविसंघको राजनीति गर्न अब हामी दिँदैनौ । यो युवा बिद्यार्थीको फोरम हो ।
अधिबेशन रोक्न नेविसंघकै नेताहरु लागेको बाहिर हल्ला छ भनी ?
नेबिसंघ एउटा महासागर हो । यो भित्र विभिन्न सोचका मानिसहरु छन् । आफ्नो क्षमता, हैसियत नभएका तर स्थापित हुन खोज्नेले केही रडाको मच्चाएका मात्र हुन । आफ्नो निधारमा हैसियत विना कै टिका लगाउन उनीहरु खोज्दैछन् । नेपाल बिद्यार्थी संघलाई भजार खाइरहेका र ब्यक्तिगतरुपमा उपभोग गरिहेकोहरुलाई अधिबेशनले निकै ठुलो घाटा गर्ने वाला छ । त्यही भएर उनीहरुले यो अफबाह फैलाएका हुन् ।
तपाई सभापति भए नयाँ काम के गर्नुहुन्छ ? के छन् योजनाहरु ?
नेविसंघबाट क्याम्पस लगाएतका पदहरुमा जो पनि जान सक्छ । तर स्वच्छ र गतिशिल नेविसंघ बनाउन आवश्यक छ । जुन ब्यक्ति गतिशिल हुन्छ, त्यही ब्यक्तिले मात्र नेविसंघलाई गतिशिल बनाउन सक्छ । आज मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको मुल समस्या छ, म नेतृत्व पुगे बिद्यार्थीका फाँटबाट गर्ने हर कोसिस गर्छु ।
दोस्रो हाम्रो शिक्षा नीति ब्यवहारिक छैन । शिक्षा जीवन उपयोगि हुनुपर्दछ । टेक्निकल शिक्षा मार्फत उपयोगि शिक्षा बनाउनु पर्दछ । छोराछोरी इन्जिनियर र डाक्टर पढाए मात्र सार्थकता ठान्ने हाम्रो सामाजिक परम्परा छ त्यसको मुल दोष त्रिवि हो । त्योसँग जुध्न आवश्यक छ । हिजो एउटा भनाई थियो छोरो विग्रियो कमर्सले, छोरी बिग्रिइ नर्सले’ भन्ने उखान थियो त्यो त आज परिवर्तन भइसकेको छ । म्यानेजमेन्ट नै सवैत्तम कुरा हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
नेपालका बिद्यार्थीहले सवैभन्दा ठुलो एउटा समस्या भोगिरहेका छन् । शिक्षाभित्रको माफियाकरण । माफियाकरणबिरुद्ध म ठुलो शक्ति, ताकत खर्चिने छु । यो चानचुने ताकतबाट सम्भव छैन । त्रिवि र केयूको आफ्नो नीति छ । तर अन्य यूनिर्भसिटीहरुले सरकारी नियमलाई पालना गरेका छैनन् । एउटा बिद्यार्थी सरकारी युनिभर्ससिटीबाट दुई लाख ४० हजार फिमा पढन पाउँछ । त्यही इन्जिनियरिङको कोर्ष अन्य प्राइभेट युनिभसिटीबाट लिँदा झण्डै १२ देखि १५ लाख खर्च गर्नु पर्दछ । यो शिक्षाको भित्रको माफियातन्त्रको चरमरुप हो । फि बढाउने बिषयमा प्राइभेट युनिभर्सिटीवालाको एउटा बोर्ड छ त्यसले मनपरी ढंगबाट फि बढाइरहेको छ । हामी कति रकम उठाउन सक्छौ, कति ठग्न सक्छौ भनेर निर्णय गर्छ र फि निर्धारण हुन्छ । यसलाई रोक्न राज्य क्षेत्रबाट कुनै काम भएको छैन ।
म नेविसंघको अध्यक्ष भएको दोस्रो दिनदेखि माफियाबिरुद्ध मेरो अभियान सञ्चालन हुनेछ । यो देशका अभिभावकहरुले सस्तो मुल्यमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सक्नु पर्दछ । आलु, कोदो, धान, अम्लिसो रोपेर पनि छोरालाई इन्जिनियर बनाउन सक्ने शिक्षा हुनु पर्दछ । मोटो रकम बालामात्र इन्जिनियर डाक्टर बन्ने कुराको अन्त्य गर्नु पर्दछ । त्रिविबाट करिव ३ लाखले इन्जिनियर उत्पादन हुन्छ भने प्राइभेटले त्यसको २० प्रतिसत रकम बृद्धि मात्र उठाउन पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । इन्फास्टक्चरका आधारमा २० प्रतिसत भन्दा बढि लिन नपाइने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ र मेरो मुल कदम यही हुनेछ । यसबाट शिक्षाको शिर ठाडो हुन्छ र माफियाको शिर निहुँरिनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रको अर्काे विसंगति पनि छ, राजनीतिक भागबन्डा । दक्षताका आधारमा शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारी नियुक्त भएका हुँदैन् राजनीतिक दलको रंग दलेर नियुक्त हुने गरेका छन् । यो निकै खराव काम हो । यसका बिरुद्ध पनि लड्न जरुरी छ ।
मोदी नेताभन्दा अभिनेता रहेछन्
सानैमा धेरै भगवान जपेँ तर अहिले थाहा भयो भगवान नै रहेनछन्
विनयको नशा: मोटरसाइकल धरौटी राखेर बेवारिसे लाशको सदगत
यि हुन मन्त्री बन्न पाँउ भन्दै भारतीय दुतावासमा बिन्तीपत्र हाल्नेहरु
प्रचण्डको सचिवालयले पिएको वाह्र लाख पचास हजारको पानीको बिलले खानेपानी मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली
चार हजार व्यापारी कानूनी कठघरामा
कांग्रेस पराजयको दोष पार्टी नेतृत्वलाई लगाए रामचन्द्रले
हिजो संविधान जलाउनेहरुले नै देशलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजिरहेको छन